Vera ed il Vervece by Gocce - On the Sea - I-Airbnb
Vera ed il Vervece by Gocce - On the Sea
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-The Gocce Team
Indawo ekahle kakhulu uma ufuna ukuzikhipha kwezithandani efulethini elihle eline-terrace enhle ebheke ulwandle. Ibekwe ethekwini lasendulo nelihle lase-Marina della Lobra, lena yindawo ekahle kakhulu yokushaywa wumoya okuhlaba umxhwele.
- Ukusekelwa kwezivakashi okungu-24/7
- Kuhlanzwe kahle -
Amashidi namathawula ombhede
wekhwalithi yehhotela Ihlalisa kahle abantu ababili, ithala elimangalisayo le-Vera ed il Vervece libheke ulwandle, eduze ngokwanele ukunambitha umoya onosawoti futhi uzwe umoya wolwandle. Cabanga ngokuphumula nengilazi yewayini njengoba ilanga litshona, amanzi acwengiwe kuze kube yilapho iso lingabona.
I-Vera ed il Vervece inikeza indawo yokuhlala esesitayeleni futhi eklanywe kahle. Kukhona amathayili amahle aphansi aluhlaza okwesibhakabhaka kuyo yonke i-, ahlaziya amanzi ngaphandle nje. Indawo yokuhlala eyinhloko inendawo yokulala, yokudlela kanye nendawo yokuhlala. Kunezinto zobuciko kuyo yonke i-, njenge-headboard yensimbi engavamile. Itafula lokudlela labantu ababili lihlezi ngaphambi kwefasitela elibiyelwe elinokubukeka okuhle futhi kunesihlalo esigoqekayo sokungcebeleka.
Ifulethi linesistimu ye-air conditioning, futhi kukhona uxhumano lwe-inthanethi lwe-Wifi.
Kuneminyango ephindwe kabili eholela kwi-terrace yakho yangasese enamatafula anezihlalo. Ukusuka lapha, amanzi olwandle angacacisa kangangokuthi kungenzeka ukuthi abuke ngqo embhedeni wolwandle.
Ikhishi line-hob yegesi, i-friji freezer, iketela, i-toaster kanye nomshini wokwenza ikhofi we-mocha. Kukhona ibhodi loku-ayina ne-ayini. Igumbi lokugezela lineshawa evalekile, umcengezi wokuwasha, indlu yangasese, i-bidet kanye nomshini wokomisa izinwele.
Ifulethi lingafinyelelwa kuphela ngezinyawo ukusuka epaki lezimoto e-Marina della Lobra futhi lizothatha cishe imizuzu engu-8-10 uhamba ngezinyawo ogwini.
Uma ufisa ukuhlola kude kakhulu, i-Masa Lubrense inokuningi ongakunikeza. Kunemizila yasemaphandleni engaphezu kuka-100km, izindawo zokudlela ezinhle kakhulu kanye nogu cishe amamayela angamashumi amabili ubude. Noma kungani ungavakasheli isiqhingi sase-Capri, i-Positano noma i-Pompeii? Noma kunjalo ukhetha ukuphumula, i-Vera ed il Vervece izokunikeza ikhaya usekhaya ngesikhathi sokuhlala kwakho.
4.68 · 66 okushiwo abanye
Idolobhana lase-Marina della Lobra liyi-marina yasendulo yokudoba, enamarekhodi aqala lapho lisetshenziswa njengendawo yokuhlala yasehlobo ngabantu base-Rome Yamandulo. Itheku linokuthula namuhla, kunezikebhe zokudoba ezihamba emagagasini kanye nomoya okhululekile. Kungenzeka ukuqasha isikebhe ukuze ufinyelele ama-bays nama-inlet angase abe nzima ukuwafinyelela.
Kukhona izitaladi ezakhiwe esihlahleni ezinezihlahla zomnqumo zakudala kanye nesonto elithandekayo elinikezelwe ku-Madonna della Lobra kusukela ngekhulu lesithupha, enye yezindawo eziphawuleka kakhulu e-Sorrento Peninsula. Lapha, izakhamuzi zinikeze imali nangezinkinga ngethemba lokubuya okuphephile kwabahamba ngomkhumbi nabadobi.
Ibungazwe ngu-The Gocce Team
Ngenkathi uhlala e-Vera e Vervece, uzoba nokufinyelela okugcwele ku-Gocce Concierge desk. Ithimba lethu lomsizi wesihambi linolwazi olubanzi lwendawo kanye nesipiliyoni sokuhlala nokusebenza e-Sorrento nase-Amalfi Coast, futhi liyatholakala noma nini ukusiza ekulungiseleleni uhambo lwakho kanye nemininingwane yohambo. Okunye kokuzithokozisa kwethu okuthandwayo kuhlanganisa umpheki wasekhaya, uhambo lwesikebhe oluya e-Capri Island, ukuvakasha epulazini, ukunambitha iwayini nokuningi. Sicela uxhumane nathi ngeminye imininingwane.
Iqembu le-Gocce lizotholakala 24/7 ukusiza ngemininingwane yokuvakasha nokuhamba, noma yiziphi izicelo ezikhethekile ongase ube nazo ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ngenkathi uhlala e-Vera e Vervece, uzoba nokufinyelela okugcwele ku-Gocce Concierge desk. Ithimba lethu lomsizi wesihambi linolwazi olubanzi lwendawo kanye nesipiliyoni sokuhlala…